Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 493928 times)
« Reply #880 on: November 22, 2012, 10:37:32 AM »
« Reply #881 on: December 14, 2012, 10:46:42 PM »
ဖတ်ပီးပီလားတော့ သိဘူးနော် ရယ်စေချင်လို့သဘောပေါက်
စာမေးပွဲဖြေပြီးနောက် ဖခင်က သားကိုပြောသည်။
“ဖေဖေ့ကို သားရဲ့ အရည်အချင်းမှတ်တမ်းကတ်ပြား ပြပါဦးကွ”
“သား သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ခဏ ငှားသွားပါတယ်။ သူ့အဖေကို သားရဲ့ကတ်ပြားညာပြပြီး ခြောက်လှန့်ဦးမယ်တဲ့ဗျ”
သောမတ်(စ်) အက်ဒီဆင်သည် အန်ဂျေအော်ရိန်းတွင် ရထားတစ်စင်းပေါ်မှဆင်းပြီး ပလက်ဖောင်းအတိုင်း လျှောက်လာ
ခဲ့သည်။ တီထွင်သူပညာရှင်ကြီးရဲ့ မေ့တတ်ပုံကိုသိသော ဘူတာရုံအုပ်က မေးသည်။
“မစ္စတာ အယ်ဒီဆင်…ခင်ဗျား တစ်ခုခု ကျန်နေသေးသလား”
အယ်ဒီဆင်က ခရီးဆောင်အိတ်များကို အမြန်ရေရင်း ပြန်ဖြေလိုက်သည်။
ထိုသို့ပြောရင်း သူသည် ရထားပေါ်သို့ အမှတ်တမဲ့ ကြည့်လိုက်မိသည်။ ထို့နောက် ခရီးဆောင်အိတ်ကိုချရင်း စီးလာခဲ့
သောရထားဆီသို့ ပြန်ပြေးသွားပါသည်။ သူ့ကို အလျင်စလိုဖြစ်အောင် သတိပေးလိုက်သောအရာမှာ ပျားရည်စမ်းခရီးမှ
သူနှင့်အတူပြန်ပါလာသော သတို့သမီး၏မျက်နှာကို ပြတင်းပေါက်တွင် တွေ့လိုက်ရသောကြောင့်ပင်…။
ကျွန်မ အလုပ်လုပ်နေသော စားသောက်ဆိုင်က မန်နေဂျာမှာ ပျော်ပျော်နေတတ်သဖြင့် လူချစ်လူခင်ပေါများသည်။
သို့ရာတွင် သူ့ရှေ့၌ သူ့အရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မည်သူမှ မပြောရဲကြချေ။ အကြောင်းမှာ သူသည် အလွန်အမင်း အရပ်ပု
သောကြောင့်ပင်။ တစ်နေ့တွင် သူသည် ဆိုင်တံခါးကို ဒေါနှင့်မောနှင့်ဖွင့်ကာ ပြောလိုက်ပါသည်။
ကျွန်မနှင့် အပေါင်းအဖော် စားပွဲထိုးကောင်မလေးများမှာ မှင်သက်သွားကြသည်။ ထို့နောက် စားပွဲထိုးတစ်ယောက်၏
ပြောစကားကြောင့် မန်နေဂျာမှာ ပို၍ ဒေါသထွက်သွားတော့သည်။
“ဘယ်သူကများ ဒီလောက်တောင် ခါးကုန်းနိုင်ပါလိမ့်နော်” တဲ့။
« Reply #882 on: December 14, 2012, 11:04:36 PM »
လူငယ်ဇနီးမောင်နှံသည် ပေးဆပ်ရမည့် လစဉ်ကြွေးများကို စစ်ဆေးရာ နောက်ဆုံးနှစ်ခုသို့ ရောက်လာပါသည်။
"အလို…ဟန်နီရေ…ကိုယ်တို့တော့ ဘိုင်ပြတ်နေပြီကွ။ မီတာကြေးနဲ့ ဆရာဝန်ကြေး ဘယ်ဟာအရင်ပေးရင်
ကောင်းမလဲ။ ကိုယ်တော့ စဉ်းစားရ ကြပ်နေပြီကွာ" ဟုခင်ပွန်းက ပြောသည်။ "အိ်ု…မီးတာကြေးပဲ အရင်ပေးရမှာပေါ့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆရာဝန်ကတော့ ရှင့်ရဲ့ သွေးစီးကြောင်းတွေ ပိတ်ပစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး"
အရက်ဆိုင်တွင် လူသုံးယောက် စကားပြောနေကြသည်။ နှစ်ယောက်က သူတို့၏ ဇနီးများအပေါ် အနိုင်ယူပုံများကို
ကြွားဝါပြောဆိုကြသည်။ တတိယတစ်ယောက်ကမူ ထူးထူးခြားခြား နှုတ်ဆိတ်နေသည်။ အချိန်အနည်းငယ်အကြာတွင်
လူနှစ်ယောက်အနက် တစ်ယောက်က တတိယလူကို မေးလိုက်သည်။
"ကဲ…မင်းကရော ဘယ်လိုလဲကွ။ မင်းဇနီးကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အနိုင်ယူသလဲ"
"ငါပြောပြပါမယ်ကွာ။ တစ်ညကဆိုရင် ငါ့ဇနီး ငါ့ဆီကို လေးဘက်ထောက်ပြီးတောင် လာရတာကွ" ဟု တတိယ
တစ်ယောက်က ပြောဆိုသည်။ "ဝိုး…ဒီနောက်ရော ဘာဖြစ်သေးလဲ "
တတိယလူက ဘီယာကို အားပါးတရ သောက်ပြီးနောက် သက်ပြင်းချကာ ပြောလိုက်သည်။
"ငါ့မိန်းမက ပြောသေးတယ်ကွ။ ကုတင်အောက်က ထွက်လာပြီး ယောက်ျားပီပီ တိုက်ခိုက်စမ်းပါတဲ့"
« Reply #883 on: December 14, 2012, 11:37:46 PM »
တော်တော်များများနဲ့တိုက်ဆိုင်မယ် ထင်တယ် ........
« Last Edit: December 15, 2012, 12:14:32 AM by Junior Honey »
« Reply #884 on: January 02, 2013, 11:53:20 AM »
အမေရိကန်မ တစ်ယောက်ဟာ စပိန်သား တစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး စပိန်နိုင်ငံမှာ လိုက်နေတယ်တဲ့..။
ဒါပေမယ့် အမေရိကန်မဟာ စပိန်စကား လုံးဝမတတ်ပါ..။
သူမဈေးသွားလို့ ကြက်ပေါင် ၀ယ်ချင်တဲ့အခါတိုင်း သူမရဲ့ စကပ်ကို ပေါင်ထိ လှန်ပြပါတယ်..။
အဲလိုနဲ့ ဈေးသည်က သူမ ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာကို သိနိုင်တာပေါ့.။
တစ်နေ့မှာတော့ သူမဟာ ငှက်ပျောသီးဝယ်ချင်ပါတယ်.။
ဒါပေမယ့်လည်း ဘယ်လို ပြရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်.။
အဲဒါနဲ့ သူအမျိုးသားကို ခေါ်သွားတယ်..။
ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတွေးပုံ တွေးနည်းကိုတော့ သဘောကျမိပါရဲ့...။
Credit to -> FB
« Last Edit: January 02, 2013, 12:03:12 PM by နိုးတူး »
« Reply #885 on: January 03, 2013, 11:12:57 AM »
လူတယောက်ဟာ ဆေးခန်းထဲကို ၀င်လာပြီး ဆရာဝန်ကို ခုလို ပြောပါတယ် ...
“ဆရာ .. ကျနော့်မှာ လိင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာ တခု ရှိပါတယ်”
“ကောင်းပြီ.. ခင်ဗျား ရဲ့ ပုံမှန်တနေ့တာ သွားလာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို အရင် ပြောပြပါဦး”
“ဒီလိုပါ .. ဆရာ .. မနက်လင်းအားကြီး အချိန်က စပြောရရင် ကျနော့် မိန်းမ က ကျနော့်ကို ၃ နာရီလောက်မှာ အမြဲနှိုးလေ့ ရှိပါတယ် .. အဲမှာ တကြောင်း ဆွဲပါတယ်.. နောက် မနက် ၅ နာရီလောက် ကျတော့ တခါ အေးအေးဆေးဆေးနှပ်ပြီး လင်းဆွဲလေးဆွဲတာ ကျနော် ရုံးသွားခါနီး အထိ ပေါ့ ”
“အင်း .. ဟုတ်ပြီ”
“အဲနောက် အလုပ်ကို သွားတဲ့ ရထားပေါ်မှာ နေ့တိုင်း တွေ့နေကျ ရေလည်လန်းတဲ့ ကောင်မလေး နဲ့ နေ့တိုင်း လုပ်နေကျတွဲထဲက အကန့်လွတ်လေးမှာ တကြောင်း နေဖြစ်ပါတယ် ဆရာ”
“ဟင့်အင်း ဆရာ .. မပြီးသေးဘူး .. အလုပ်ထဲကို ရောက်တော့ ကျနော့်အရမ်းသဘောကျတဲ့ အတွင်းရေးမှူး မလေး ရှိတယ်လေ .. အဲဒါ သူနဲ့ က စတိုခန်းထဲမှာ တကြောင်းဆွဲ ပြန်ရော ..”
“ဒါဆို ကျနော် သိပြီ”
“ဟင့်အင်း ဆရာ .. နေ့လည်စာ စားတဲ့ အချိန်ကျတော့ ကျနော်ရေလည် ခိုက်တဲ့ အမျိုးသမီး နဲ့ တွေ့ပြန်ရော .. သူ နဲ့ ကျတော့ ဒရောသောပါးလေးပေါ့ ဆရာ ရယ် ”
“ကျနော် နားလည်သလိုလိုတော့ …”
“ဟင့်အင်း ဆရာ … အလုပ်ပြန်ခါနီးတိုင်း ကျနော့်ရဲ့ ဘော့စ် အမျိုးသမီးက သူနဲ့ တကြောင်းဆွဲရင်ဆွဲ မဆွဲရင် အလုပ်ထုတ်ပစ်မယ် လို့ အမြဲ ပြောတယ် ဆရာ .. အဲဒါနဲ့ ဘဲ .. ”
“အော.. ကျနော် ခုမှ သိတော့တယ် ..”
“မပြီးသေးဘူး ဆရာ .. ကျန်သေးတယ် .. အိမ်ပြန်ရောက်လို့ ညစာ မစားခင်မှာ မိန်းမက တခါမှုတ်ပေးလေ့ ရှိတယ် .. ညစာ စားပီးတော့ မအိပ်ခင်လေးမှာ တကြောင်းဆွဲဖြစ်သေးတယ် ဆရာ”
“ကဲ .. ဒါဆို ခင်ဗျား ရဲ့ လိင်ပြဿနာ ဆိုတာက ဘာတုန်း”
“ည ၁၂ နာရီလောက် တရေးနိုးလို့ ကျနော့်ဘာသာ masterbate လုပ်တဲ့ အခါကျရင် နာတယ် ဆရာ”
« Reply #886 on: January 17, 2013, 06:02:17 AM »
One day, while relieving himself in the employee restroom, Carl could not help but notice the unusually long penis on the black man in the adjoining urinal. "How do you guys do that?" asked Carl. "I mean, get such long dicks?" "Well," replied the black man, "when having sex, just push it in slow and pull it out quick. That exercises it."After hearing this, Carl promised himself that he would try out this new dick-stretching technique on his wife. That night, Carl made love to his wife and tried the new method. Shortly after they finished, Carl asked, "Well dear, did you notice anything different about me?""Yeah," said the wife. "You fuck likeablack man!"
« Reply #887 on: January 17, 2013, 08:07:12 PM »
အဘွားကြီး ။ ။ ဒါဖြင့် မနက်ဖြန် မင်းတင်ပါးမှာ တက်တူးထိုးပြီးသား ဖြစ်နေရမယ် ဆိုတာကို ပေါင်တစ်သောင်းကြေး လောင်းမလား ။
ဘဏ်သူဋ္ဌေး ။ ။ ဟာဗျာ..ကျွန်တေ
ာ့်တင်ပါးမှာ ဘာလို့ တက်တူးထိုးရမှာလဲ ။ လောင်းရင် ကျွန်တော်ပဲ အချောင်ပေါင်တစ်သောင်းရနေမှာပေါ့ ။ အလကား မလိုချင်ပါဘူး ။
ဘဏ်သူဋ္ဌေး ။ ။ ကဲ..ဒီလိုဆိုရင်လည်း လောင်းမယ်ဗျာ ။
ကြားရက်တွေထဲမှာ သူဋ္ဌေးက သဘောကျပြီး တပြုံးပြုံးနဲ့ ပေါ့ ။ တင်ပါးမှာ ဘာတက်တူးမှ ထိုးစရာမလိုဘူး ။ ဒီအဘွားကြီး ဒီတစ်ခါတော့ ရှုံးပေါက်ပဲ ။ ပေါင်တစ်သောင်း အလကားသက်သက် ပေးချင်လို့ လာလောင်းတာဆိုပြီး တွေးနေတယ် ။
သက်သေပြဖို့ အဘွားကြီးက ပြောလိုက်တာနဲ့ ဘဏ်သူဋ္ဌေးက ဘောင်းဘီချွတ်ပြီး ဖင်ဗူးတောင်း ထောင်ပြတယ် ။
ဘဏ်သူဋ္ဌေး ။ ။ ဟဲဟဲ..အဘွားရေ..အဘွားရှုံးပြီနော် ။ တစ်သောင်းလေး မစပါဦး ။
အဘွားကြီး ။ ။ အေး..ဒီမှာ တစ်သောင်း ။
ပါလာတဲ့ လူထဲက တစ်ယောက်က မေ့ လဲမလိုဖြစ်နေလို့ ဘဏ်သူဋ္ဌေးက အဘွားကြီးကို မေးတယ် ။
ဘဏ်သူဋ္ဌေး ။ ။ အဲဒီတစ်ယောက်က နေမကောင်းလို့ လား ။
အဘွားကြီး ။ ။ သြော်..ဒီလူလား..အရှုံးသမားလေ ။ ဘဏ်သူဋ္ဌေး ဖင်လှန်ပြမယ် ဆိုတာကို မယုံဘူးဆိုလို့ ပေါင်တစ်သိန်းကြေး လောင်းထားတာ အခု သူရှုံးပြီလေ ။ အဲဒါကြောင့်ပါ ။ —
credit to forever friends
« Reply #888 on: January 17, 2013, 08:35:18 PM »
နာမည်ကျော် တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခကြီးတစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့ သုတေသနလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် တပည့်တစ်ချို့နဲ့အတူ ကျေးရွာတစ်ရွာကို လေ့လာရေးခရီးထွက်ခဲ့သတဲ့။ ရွာရဲ့စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနဲ့ လူနေမှုဘဝတွေကို ပါမောက္ခကြီးဟာ စနစ်တကျ လေ့လာတယ်။ မှတ်သားတယ်။ မေးမြန်းတယ်။
မွေးမြူရေးသမားတစ်ဦးနဲ့ ဆွေးနွေးနေစဉ်မှာ မွေးမြူရေးသမားက သူမွေးထားတဲ့ နို့စားနွားမတွေ လွှတ်ကျောင်းထားတာကို ကြည့်ပြီး…
“ဟို စာဥဆိုတဲ့ ကောင်မ ဘယ်သွားဦးမှာလဲ?”
“တိမ်ပြာဆိုတဲ့ ဟာမကလည်း ဟိုဘက်ခြံစည်းရိုးတိုင်ကို သွားပွတ်နေပြန်ပြီ”
“ဟဲ့ ဖြူ မြက်ကောင်းကောင်းမစားဘဲ ဘာဖြစ်လို့ တခြားကောင်မတွေကို လိုက်ဝှေ့နေတာလဲ” စသည်ဖြင့် လှမ်းလှမ်းပြီး မြည်တွန်တောက်တီးနေတယ်။ ပါမောက္ခက မွေးမြူရေးသမားကို အံ့သြတကြီး ကြည့်ပြီး….
“ခင်ဗျားက ခင်ဗျားနွားမတွေအားလုံး နာမည်မှတ်မိတာပဲလား” လို့ မေးလိုက်တယ်။
“မှတ်မိတာပေါ့ ဆရာကြီးရယ်။ သူတို့နာမည်မှတ်မိမှ သူတို့ကို ထိန်းရလွယ်တာ”
“တော်တယ်ဗျာ၊ ကျုပ်ကတော့ ကျုပ်တပည့်မတွေ နာမည်ကို မမှတ်မိပါဘူး”
ဒီအခါမှာ မွေးမြူရေးသမားရဲ့ ဇနီးက ဝင်ပြောတယ်။ သူမရဲ့ ပြောစကားကြောင့် ပါမောက္ခကြီးရဲ့ ဘေးက ကျောင်းသားတွေ ပြုံးစိစိ ဖြစ်သွားကြသတဲ့။
မိန်းမကြီး ပြောတာက ဒီလိုလေ…
“ဆရာကြီးက ဘယ်မှတ်မိမလဲ၊ ကျွန်မယောက်ျားလို တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် နို့မှ မညှစ်ရဘဲ´။
« Reply #889 on: January 17, 2013, 08:45:00 PM »
နာမည်ကြီး စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ တစ်ခုက အလွန်အင်မတန်မှ ကို ရက်စက်သော လူသတ်သမားတစ်ယောက်ကို အလိုရှိနေတဲ့အတွက် လူရွေးချယ်ကြပါတယ် ။ နောက်ဆုံး ဆန်ခါတင် အနေနဲ့ ယောင်္ကျား ၂ ယောက်နဲ့ မိန်းမ ၁ ယောက် ကိုရွေးချယ်လို့ရကြတာပေါ့လေ ။ အဲဒီတော့ နောက်ဆုံး စမ်းသပ်မှု အနေနဲ့ သူတို့ ၃ ယောက်ကို စစ်ဆေးကြတာပေါ့ ။ ပထမဆုံး ယောကျာင်္းကို ဗလာကျည်ဆန်တွေ ပါတဲ့ သေနတ် တစ်လက်ပေးပြီး တစ်ဖက်အခန်းမှာ ရှိတဲ့ သူ့မိန်းမကို သွားသတ်ခိုင်းပါတယ် ။ အဲဒီ လူက ခါးခါးသီးသီးကို ငြင်းပါတယ် .. သူ့မိန်းမကို သူ မသတ်ရက်ပါဘူးတဲ့ ...။ ဒုတိယ တစ်ယောက်ကလဲ ဒီလိုပဲ ကိုယ့်မိန်းမတော့ ကိုယ် မသတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပဲ ငြင်းပါတယ် ..။ အဲဒါနဲ့ နောက်ဆုံး အမျိုးသမီး အလှည့်ရောက်လာတာပေါ့ အမျိုးသမီးကိုပြောတယ် .. ဒီသေနတ်ကို ယူသွားပြီး ခင်ဗျား ယောင်္ကျားကို ပစ်သတ်လာခဲ့ပါပေါ့ .. အမျိုးသမီးက အခန်းထဲ ၀င်သွားတယ် အခန်းထဲက ဆူဆူညံညံ အသံတွေ ကြားရပြီး အမျိုးသမီးက မောမောပန်းပန်းနဲ့ ပြန်ထွက်လာတယ် အပြင်က အရာရှိတွေကို စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ ပြောလိုက်တယ်
ရှင်တို့က ဗလာကျည်ဆန်တွေ ဘာလို့ထည့်ထားတာလဲ .. အမလေး မနဲကို ရိုက်သတ်ခဲ့ရတယ်...။
credit t၀ မြန်မာ့ဟာသနှင့် သတင်း (Facebook)